Ikhaya STARS E-EUROPE IJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
IJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Isikweletu ku-Twitter
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Joe“. Indaba yethu yeJoe Willock Childhood Story Plus ye-Untold Biography ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Ukuphila kukaJoe Willock- Izikhathi zakuqala kuze kube manje. Ikhredithi ku- i-ans-wer kanye ne-Twitter
Ukuhlaziywa kufaka phakathi impilo yakhe yobuntwana, isizinda somndeni, imbali yempilo ngaphambi kodumo, ukukhuphuka kudumo lwendaba, ubudlelwane, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni kanye nendlela yokuphila njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungomunye wale nsizwa ethokozisayo enamathemba amahle. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-biography kaJoe Willock ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
UJoseph George Willock wazalwa ngosuku lwe-20th luka-Agasti 1999 eLondon Borough of Waltham Forest, e-United Kingdom. UWillock wazalwa njengomntwana wesithathu futhi omncane kunabo bonke kubazali bakhe- umama othandekayo nobaba obukeka ebukeka obufana nobukaCharles.
Hlangana Nabazali bakaJoe Willock. Ikhredithi ku- I-ArsenalFC
Ngokuvumelana ne I-TheSun UK, Ngemuva kokuzalwa kwakhe wabonwa odokotela ukuthi banokungafani kobude bomlenze. Lokhu kusho ukuthi elinye imilenze yakhe lalifushane kunelinye. UJoe ompofu kuyo yonke iminyaka yokuqala yokuphila kwakhe kwadingeka anqobe zombili izinkinga zomzimba nezengqondo ezazibangelwa yilokhu kusilela. Lokhu kuthinte ijubane lakhe kuze kube manje futhi yisona sizathu esenza angayena umpetha wama-sprinters.
Umsuka Womndeni kaJoe Willock: Yize azalelwe eNgilandi, kepha umndeni kaJoe Willock ungowokuzalwa e-Afro-Caribbean. Banomsuka wemindeni yabo kusuka eMontserratia, iBritish Overseas Territory kanye nesiqhingi eCaribbean. Njengoba kuphawulwe ngezansi, iMontserratia iyisiqhingi esiphazamiseka kakhulu ngokuqhuma kwezintaba-mlilo maphakathi nama-1990s.
UJoe Willock unomsuka wakhe womndeni nezimpande ezivela eMontserrat
Phakathi kwe-1995 ne-2000, ukuqhuma kwentaba-mlilo kuphoqe izingxenye ezimbili kwezintathu zabantu bakulesi siqhingi ukuba babalekele, ngokuyinhloko baye e-United Kingdom. Kuncane okwaziwayo ukuthi ngabe abazali bakaJoe Willock babephakathi kwalabo abalekela e-United Kingdom ngaphambi kokuthi uJoe indodana yabo azalwe e1999.
Isiqalo sokuphila: UJoe Willock ukhulele eWaltham Forest eceleni kwabafowabo ababili ogama lakhe nguMatty noChris. Ngaleso sikhathi, ikhaya lomndeni wakhe, elaliseNyakatho East yeLondon lalingekude kangako nenkundla yangaphambili ye-Arsenal Highbury. Le nto yokusondela kwaholela ekwakhekeni komndeni onobuhlakani bebhola. Uthando lomdlalo lwenze bonke abafana abathathu (uMatty, uChris, noJoe) benza izingqondo zabo ngesidingo sokuba ngabathandi bebhola lapho sebekhulile.
Ingemuva Komndeni: UJoe Willock wayevela kwimvelaphi yomndeni ongaphansi kwesilinganiso. Bobabili umama nobaba bakhe babengeyena umuntu ocebile futhi babevame ukuzabalaza ukuze umndeni wabo uqhubeke. UCharles nomkakhe bake bayeka imisebenzi yabo ukuze babone izingane zabo ziphumelela.
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ubaba Onamandla: UCharles Willock, ubaba ophambili webhola lezinyawo kanye nebutho lokushisekela ukuhweba komndeni wakhe wanquma ukuthatha uhambo lokuguqula amadodana akhe amathathu abe ngabadlali bebhola.
UJoe Willock Umsebenzi Wokwakha. Isikweletu ku-Arsenal nase-DMail
UCharles wafundisa uJoe kanye nabafowabo ukuthi kaze babuye ezingozini, ebayisa emapaki ebhola ahlukene ukuze baziqeqeshe futhi babambe iqhaza emiqhudelwaneni. Wathonya i ukuphela kwamadodana akhe futhi wenza konke okusemandleni ukuba aphumelele izivivinyo ngezifundo zebhola eziphezulu.
Ubaba weLucky wabona umbono wakhe wezingane zakhe zisebenza ngendlela afuna ngayo. UMatty, indodana yakhe yokuqala yabizelwa okokuqala ukuzolwa no-Arsenal academy, kwalandela uChris noJoe Willock ngokulandelayo. Injabulo yomndeni wonke ibingasenamkhawulo ngemuva kokubona bonke abafana abathathu bedlula ekulingweni ngemibala ezindizayo futhi bangeniswa esikhungweni sezemfundo se-Arsenal.
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
UJoe Willock uthando ngebhola lwambona esayina inkontileka yakhe yokuqala ne-Arsenal eneminyaka engu-4. Kuyise uCharles obukeka eqinile, konke lokhu bekuqinisekisa ukuthi okungenani indodana yakhe eyodwa iyenza eqenjini lokuqala.
UJoe Willock Ukuphila Kwasemsebenzini Kwasekuqaleni. Ikhredithi ku- I-Arsenal FC
Bobathathu abafowethu- uMatty, uChris noJoe bonke benza ibanga kumaGunners. Baphupha ngokuba yi-trio yokuqala yabafowethu ukudlala kwiPremier League ndawonye. Ubaba wabo uCharles wayeka umsebenzi wakhe hhayi nje ukuhambisa amadodanakhe e-academy, kodwa kuwasize aphathe imisebenzi yawo yebhola ekhulayo. Njengoba uJoe Willock eke wakubeka;
“Ekukhuleni kwami, bekuwukuphela kwengqondo yomuntu engikukhathalela ukuphawula emidlalweni yami. Ngemuva kwemidlalo, ungitshela ukuthi ngidlale kahle noma kubi. Angilalele neze omunye umuntu ngaphandle kukababa wami ”.
Bobathathu laba bafowethu bathuthuka phakathi kweminyaka yobudala kwaze kwaba yilapho kungalindelekile kwenzeka kumuntu oyedwa futhi kamuva, kwabafana bakaWillock.
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Akuzona zonke izinto ezibahambela kahle abafana beWillock phakathi neminyaka yabo yokwakha ne-Arsenal. Umfowabo kaJoe uMatty wakhululwa eneminyaka eyi-15 ngenxa yokusebenza okungagculisi. Ngakolunye uhlangothi, uChris uthathe isinqumo sokushiya i2017, walibangisa ePortugal ukuze ayoqhubeka nomsebenzi wakhe. UJoe Willock ukuphela komuntu owasala ngemuva. Ekhuluma ngesipiliyoni, wake wathi;
“Bekubalulekile ukuthi mina nabafowethu sihlukane sihambe ngezindlela ezihlukile. Ngakubona lokho kuza. Bengazi ukuthi isikhathi sizofika, ngolunye usuku lapho sasingeke sihlanganyele sonke. Akubanga lula kimi lapho uChris eya ePortugal. ”
KuJoe, bekunzima ngempela kuye ukuthi athathe lapho umfowabo osekhulile ongumdala uChris eshiya iBenfica. Bobabili abafowethu ababesondele kakhulu babehlala bendawonye kusukela bazalwa.
“Sasihlala sonke igumbi elilodwa. Lokhu kuchaza ukusondela kwethu. Lapho uChris ehambile, kwaba sengathi ucezu lwami lushiyile ekhaya ” kusho uJoe Willock owayenenkinga yebhola lakhe ngalezo zikhathi.
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
UJoe Willock ekugcineni uqhubekele phambili njenge-ukumangalela ukuqala kweqembu lokuqala kwaba yiphupho lakhe lokugcina. Impumelelo yakhe yokuqala yezemidlalo yafika ngaphambi nje kokuqeda umsebenzi wakhe wobusha. Lesi kwakuyisikhathi asiza iqembu lakhe labalingani be-U17 ekunqobeni Ikusasa Cup.
UJoe Willock impumelelo yokuqala eminyakeni yobusha bakhe yobusha. Isikweletu ku-Twitter.
Ku-2017, uJoe Willock wabizelwa eqenjini eliphakeme lase-Arsenal. Ngawo lowo nyaka wathola indondo yakhe yokuqala (The 2017 FA Community Shield) ngaphandle kokudlala emncintiswaneni.
UJoe Willock- Ukugubha indondo yakhe yokuqala njengomdlali omkhulu
Isikhathi Esichazayo: Umzuzu wokuma kukaJoe Willock egqoke ihembe lase-Arsenal ngoMeyi we-2019 ngesikhathi ethatha indawo kaMesut Ozil owayengakaze abe khona kowamanqamu e-Europa League. Ukumbonga kwabalandeli be-Arsenal akuzwakalanga njengoba bebefisa ukumbona eseba yiqembu lokuqala njalo.
Kepha esikhundleni sokukhubazeka, umsubathi wakhula esuka emandleni esiya emandleni. UJoe Willock's umzuzu olandelayo wokuma ufike ngesikhathi seNdebe Yomhlaba wonke ye2019. Ngalesi sikhathi, waba nokusebenza okuhle ngokumelene nabadlali basenkabeni yeBayern. UWillock usebenzise lo mdlalo ukuthumela isitatimende kubalandeli ukuthi angancintisana nabahamba phambili.
Umzuzu uWillock awina ngawo izinhliziyo zama-Arsenal Fans. Ikhredithi ku- Ilanga
UJoe Willock ekuqaleni kwesizini ye-2019 / 2010 uqhubeke nokubekezelela ukunyuka kwe-meteoric ne-Arsenal. Wazibona eseba ngesinye sezakhiwo ezishisa izikhawu phakathi nenkundla ekilabhini, i-feat eyazitholela yona inkontileka yesikhathi eside neklabhu.
UJoe Willock egcwalisa amaphupho akhe obuntwana. Ikhredithi ku- I-Arsenal FC
Esikhathini esithile, umfana omncane owajoyina i-Arsenal eneminyaka emine, kamuva, wasala yedwa eyolanda ifulegi likaWillock ngaphandle kwabafowabo, manje usephila ngokuphila ngamaphupho akhe. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe udumo, kungenzeka ukuthi abalandeli abaningi baye bazindla ngalo mbuzo; Ubani Intombi kaJoe Willock? Akukho okuphika amaqiniso ukuthi ukubukeka kwakhe okuhle bekungeke kumenze umvini othandekayo kwabesifazane.
Ngubani intombi kaJoe Willock
Ngesikhathi sokubhala, kubukeka sengathi uJoe Willock uye wakhetha ukugxila emsetshenzweni wakhe washiya kungekho nkomba yokuthi abe nentombi noma unkosikazi. Kodwa-ke, kunamahemuhemu akhombisa ukuthi wake waba nentombi.
I-Allegation: Njengoba kubikwe yiTheSun, uJoe Willock wake wasolwa ngokulandela ezinyathelweni zalowo owayengumfana omubi wase-Arsenal Ashley Cole - Ngokushaya igoli nentombazane yakudala ye-ace. Isenzo sikaJoe sabona abalandeli bembona eqamba isithombe somfana omubi ngaphandle kwephimbo.
Ngokuya kweTheSun, kusolwa ukuthi uJoe Willock wammemela eLondon, wamthengela amathikithi e-Eurostar wamyisa ekilabhini ekhethekile lapho bobabili bephuza iziphuzo ezibiza u- $ 2,500. Ngemuva kwalokho, bobabili uJoe nentombi yakhe babuyela endlini eqashiwe eKensington lapho bahlala khona ubusuku bonke futhi lapho, wabonwa ebhema sawubona * py cr * ck.
Izinsolo zikaJoe Willock zithandana no-Eglantine-Flore Aguilar. Isikweletu kuma-TheSun nama-FabWag
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Ukwazi ubuntu bukaJoe Willock kungakusiza uthole isithombe esiphelele ngaye. Noma ngokubukeka nje okulula, uJoe umuntu obeka amandla amaningi emzameni wakhe wokufeza noma yini afuna ukuyenza kunoma iyiphi ingxenye yempilo azibophezela kuyo.
Ama-Joe Life we-Life Life
Ngokubalulekile, uJoe Willock ubonakala njengomuntu oshintshiwe, obonakala elandela indlela eya ngokulunga ngenxa yezinkolelo zakhe. Lesi sithombe esingezansi sifingqa inkolo yakhe ikholelwa nokuthi uvela ekhaya lamaKristu.
Kuchaza uJoe Willock Inkolo
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Ngaphandle kokungabaza, umndeni wakwaWillock ubonakala uphakathi kwemindeni yebhola ephumelele ezimbalwa kakhulu ukuthobeka kakhulu kokuqala. Lapha, sikulethela imininingwane eyengeziwe mayelana nawo wonke amalungu omndeni.
UJoe Willock Ubaba: Sonke siyayazi ngemizamo kaCharles yokuqinisekisa ukuthi amadodana akhe aba ochwepheshe, okwenza ukuthi ambone njengomphathi emadodaneni akhe. Noma kunjalo, angukuthi I-Tribal Football, UCharles Willock futhi ungumhlaziyi webhola ngokubhaliswa kweWyscout, inkundla yebhola emnikeza ulwazi ledijithali kanye nokuhlaziywa kumakilabhu angaphezu kwe-1,000. Le pulatifomu imvumela ukuthi alandelele imidlalo yamadodana akhe kanye nezinye izindawo zebhizinisi lebhola. “Ubheka yonke imidlalo yethu nazo zonke iziqeshana ngazinye kaninginingi, ”Kusho uJoe Willock
Umama kaJoe Willock: Kuncane okwaziwayo ngomama kaJoe njengoba kucatshangwa ukuthi uphila impilo ethule kakhulu. Lokhu akuvimbi indodana yakhe yokugcina uJoe ukuthi imazise emphakathini wngomyalezo omnandi ku-Instagram wakhe ohamba ngamazwi akhe;
Mama, lokhu bekungokwesikhathi sonke lapho ngikubona usebenza loshintsho sekwephuze kakhulu, nesikhathi owawungaFANeli ukudla ukuze ngidle. Izikhathi owawukade ungiculela ngazo ukuze ngilale ezingalweni zakho ngemuva kokubuya kwakho emsebenzini. Ngiyakuthanda Mama. Usuku olumnandi lokuzalwa!!
UJoe Willock unikezele ngeGoal kumama wakhe emyalezweni omnandi odonsa ngaphezu kokuthandwa kwe-24K.
UJoe Willock Brothers: Uthi bewazi?… Abafowabo bakaWillock bobabili- uMatty noChris abagcinanga nje ngokuxoshwa e-Arsenal ngaphandle kokujoyina amakilabhu angcono. Lapho uMatty ededelwa e-15, waba nezilingo zokudlula inhlanhla neManchester United ngaphambi kokusuka kwakhe waya eGillham. Ngakolunye uhlangothi, uChris uthathe ukuhweba kwakhe neBenfica ngemuva kokushintshana eLondon eLisbon.
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - LifeStyle
Ukunquma phakathi kokusebenziseka nenjabulo akuyona inketho enzima kuJoe Willock njengoba azi ukuthi angaziphatha kanjani imali yakhe ebhekiwe. Ngenxa yesisekelo esihle esivela kubazali bakhe uJoe akaphili impilo yobukhazikhazi obonakala kalula yinqwaba yezimoto ezibizayo.
UJoe Willock Indlela Yokuphila- Uphila impilo elula AKEKHO obonwa kalula yiLuxury.
Amaqiniso weJoe Willock Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
IZOLO ZESITHATHU ZABO BONKE Baphila NGEMIPHAKATHI YABO: Uthi bewazi?… Bonke labafowethu abathathu bake badlala ndawonye kuMdlalo wePremier League. Phezu kobubanzi beminyaka, bobathathu badlale umdlalo owodwa ku IPremier League 2.
AbakwaWillock Brothers. UMatty umi phakathi (phakathi), uChris (kwesokudla) noJoe (kwesobunxele). Isikweletu kuDailyMail
UMatty oboniswe ngenhla edlalwe engubeni yeRed Devils kwathi omncane (uJoe Willock) wehla ebhentshini eyojoyina umfowabo uChris emidlalweni yePremier 2 eyenzeka cishe inyanga kaMeyi 2017.
Umthakathi we-Oz: Abanye abalandeli bambiza ngokuthi yiWizard ye-Oz ngoba yena kanye naye UDani Ceballos uphakathi kwalabo abasemabangeni aphakathi abazimisele ngokuxosha uMesut Ozil esikhundleni sakhe njengomdlali weqembu lokuqala. U-Ozil kaningana ubekade embukele ehlombe ngenxa yokuncintisana ngendawo yakhe.
UJoe Willock ungomunye wabadlali be-Arsenal abazimisele ngokuxosha u-Ozil. Isikweletu: Ilanga
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iJoe Willock yethu Yobuntwana Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Fikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
UWayne Rooney Ingane Yomntwana Plus Untold Biography Facts